Ma aha in aad u noqon lahayd ila. In Baxniintii 17, dadka reer binu Israa'iil Ilaah Imtixaami simaha sida haddii aanay isaga la aamini karin. Ka dib wax walba oo uu ku sameeyey iyaga, waayo,, iyaga samaynta dadkiisa, iyaga samatabbixinaya addoonsiga, bixinta iyaga iyo wixii la mid ah, ay weli ma isaga ku kalsoon tahay. Sidaas daraaddeed waxay Muuse la diriraan oo waxaad ku tidhaahdaa inay hadda waxaan cabsiin doonaa biyo. Waxay ku warsan isaga sababta uu keenay iyagii cidlada inaannu ku dhimanno. Oo iyana waxay dhab weydiisaa su'aasha ah, "Ma Rabbigu nagu ama ma ka mid ah?"
Oo kanu waa nooca gunuunac iyo cabanaya ka gees ah Ilaah in lagu gartaa qarnigan. Weeraryahanka Fast in Numbers 14, mar labaad, ku dhowaad sida rikoor jebiyo soo noqnoqda, waxay mar kale ka cabanaya oo leh waxa fiican noqon lahayd in ay dib ugu noqon in Masar. Waxay ma ku kalsoon Ilaah inaan samatabbixiyo iyo sii ballammada.
SABUURRADII Tani waxay keentaa in ay ka fikiraan labada kuwa sheekooyinka gaar ah. Iyo aayaadkiisa nagu tusin jawaab Ilaah in ay la'aanta isaga uun tala saarta.
Leexo ii raacaysaa Sabuurradii 95:10-11.
Waayo, afartan sannadood waan u cadhaysnaa, qarnigaas; waxaan is-idhi, "Waa dad quluubta ka qaldamaan,oo ay ma ay aqoon jidadkaygii. "Sidaas daraaddeed waxaan ku dhaartay xanaaqayga, "Oo iyana weligood nasashadayda ma geli doonaan."
Waxaan dooneynaa inaan ka fiirsan seddex dhibcood ka kooban caawa ka text this.
mar Dhageyso qoraalka. Ilaah ayaa sheegay in, "Waayo, afartan sannadood waan u cadhaysnaa, qarnigaas…" Well Waxaan u maleynayaa in ka jawaabaya su'aasha ah soo jiidasho leh si cad u. Ilaah ma heli cadhooday. Oo waa dembiga dadkiisa in dhirfinaya cadho this. Laakiin ma rumaysan nahay in la yaab leh wax kasta oo halkan in ay dembi ka dhigay Ilaah ugu cadhooday,. Tani waa sida Ilaah jawaab dembaajiyey.
Koraaya oo waxaan lahaa aabbo fiican,, kuwaas oo ahaa jacaylka badan iyo maqleen oo waxaan lahaa xiriir wanaagsan. Laakiin waxaan marnaba run ahaantii waa yiqiin waxa dadka niyadda uu u socday in ay ku sugan. Sidaas for kid ah kuwaas oo doonayay in ay helaan alaabtii oo taga meelaha, Waxaan nooca dareemay sida aan u ciyaaro ciyaarta. Ka hor ayaan waxaan isagii weyddiistay wax, Waxaan noocee ah isku dayeen in ay isaga ka dareento oo arag noocee ah niyadda ayuu ku jiray. "Sidee xumad Cowboys kuwa, Aabaha? Your xiiro hubi u egtahay wax fiican. "Oo kuwa su'aalo Arrintan waxaa kaa caawin lahaa ii ogaado haddii aan hadda ama mar dambe isaga weyddiista. Laakiin hababka ma qummanahay. Sidaas daraaddeed markaan wax weyddiiyana aan marna ma ogaan karo hubaasha haddii uu farxad u gurman lahaa ("Hubaal, ina!") ama cadho ("Hel outta wejigayga, ina!"). Wuxuu ahaa la saadaalin karin in jidkaas.
Well waa in aynaan filan noocan oo kale ah la saadaalin Karin oo Ilaah. Ilaah shaqeeya siyaabo dahsoon. Oo Ilaah waa la saadaalin karin siyaabo badan, laakiin waxaa jira waxba la saadaalin karin ku saabsan oo uu jawaab u dembi. Waxaa dhirfinaya cadhadiisa. Waxa uu ballan qaaday Aadan iyo Xaawo, waxay u dhiman doono haddii ay caasiyeen isaga. Dembiga aawadiis ayuu kor furay dhulka iyo dadka hoos dhex She'ool hoos ugu dhaadhacay in Numbers 15. Oo dhacdooyinka si dadban ula Sabuurka this, Ilaah mar kale ka jawaabaa isagoo cadhaysan. Dembigu dhirfinaya Ilaah cadhadiisiina.
Dhab ahaantii, weedha ah in uu tarjumay Waxaan u cadhooday qarnigan, dheeraad ah oo macno ahaan waxaa loola jeedaa "Waxaan dheereeyey qarnigan." Taasi waxa ay tarjumaadaha badan odhan. Waxay wax ka qabtaan sawirka of xuso. Ilaah waa nacdaa dadkan sababta oo ah sida waxa ay isku kibriyeen la. Sidaas si ay uga jawaabaan su'aasha ah, Ilaah ma heli cadhooday, oo wuxuu ku jawaabay in ay dembiga qarnigii hore xanaaq a, quduuska, karaahiyo.
Haatan anigu waan ogahay this laga yaabaa, xoqin kacay fikrad qaar ka mid ah dadka Ilaah. Waxay u malaynayaan, "Waa hagaag in aan Ilaah aan aad ka hadlaysaan. My Eebana ma heli cadhooday. My Eebana ma dhihi lahaa. "Waa hagaag waxaa laga yaabaa inaad xaq u. Waxaa laga yaabaa in aad ilaah ma dhihi lahaa in, laakiinse Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah oo kaliya halkan ku sameeyey text this.
Darteed ee ma jirtaa halkan dhibaato? Sidee kari a dhammaataan, quduus Ilaah sidaa si joogto ah uga jawaabaan xanaaq xanaaq iyo xataa xuso? Haddii aan si joogto ah u jawaabtay oo naagtayda la cadho oo codkoodiina way iyada, Taasina waa Dambi xun on my qayb. Ilaah cadhadiisiina, in kastoo, ma aha dembi leh sida kuweenna. Waxa aan iin shakhsiyadeed.
Sida aan ku wacdiyo this, Ma dareemayo inaan baahida loo qabo in geddoomo suulka ku wareegsan ama raali waayo, cadhadii Ilaah. Oo ma aha in aad dareento baahida loo qabo in raali saaxiibadaa non-Christian ku saabsan Ilaah cadhadiisiina way midkood. Ama ku saabsan Jahannamo. Oo ma aha inaad in ay ka xishoodaan Xukmin ee Axdiga Hore sida qaar ka mid ah si qarsoodi ah oo ku saabsan ee la soo dhaafay dembiga badan Ilaah la xaday.
Ilaah cadhadiisiina ma aha dembi ah. Waa jidka Ilaah quduus ah ay jawaab u tahay dembaajiyey. Waa jawaabta kaliya quduus u caasinimo runtan iyo khiyaamo dadka uu ka sameeyay ekaanshihiisa. Ha isku dayin inaad Ilaah isaga waafaqsanaynina, si aad u caadiga ah, maxaa yeelay, wuxuu yahay heerka. Our cadho waa dembi badan, maxaa yeelay, waannu dembaabnay!. Laakiin Ilaah baa sida Ilaah a dhammaataan quduus wuu noqon karaa oo kaliya cadhooday jidka xaqa ah.
Dembigu waa waxa kaliya in Ilaah, neceenna raalli. Oo waxay had iyo jeer, neceenna raalli Ilaah. Oo dembilayaasha oo dhan waxay yeelan doonaan si ay uga jawaabaan oo ay Ilaah u cadhaysan, haddii bartey Ilaah cadhadiisiina loogu talagalay iyaga at loo qaadan karaa daryeelka ee.
Codsiga: Mararka qaarkood marka aan ku dembaabo,, aan u damcin in uu u maleynayaa in aan in xun. Waan ogahay ka hor inta aan ahaa Christian ah, iyo xataa mararka qaarkood ka dib in, Anigu ma aan qabaa dembiga sida heshiis weyn. Laakiin waa sababta oo ah waxaan ka fikiray oo dhammuna waxay ahayd in aan loo jebiyo sharciyada qaar ka mid ah. Waxaan ahaa aan moral ku filan. Well dembigu waa wax ka badan kaliya fashilantay in ay moral ku filan. Waa dembi ka dhan ah qof - qofka ugu aaminka. Oo walbahaarinayaa qofkaas oo ka dhigaysa xanaajiyeen. Ilaah wuxuu neceb yahay dembiga.
Waxaa laga yaabaa in uusan kastoo aad ka dheregtaan. Waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso in Ilaah waa utaxadar. Waxaan ula jeedaa runtii wuxuu ahaa afartan sannadood u cadhaysnaa? Sanqadhaha sida uu haysta ciil. Sanqadhaha nooca yar yar, Ilaah. Waa maxay sababta ka dhigi isaga sidaas waalan? Well in ii keena farta laba.
II. Dembigu Ma Jidka An Beddelka
Eeg aayadda 10 mar kale. Ilaah siiyey sharaxaad qarnigan wuxuu u cadhooday. Waxa uu sheegay in, "Waa dad quluubta ka qaldamaan, oo ay ma ay aqoon jidadkaygii. "
Ilaah ayaa sheegay in ay ka qaldamaan Quluubtooda. Waxay kaliya ma ahan tag ha baadi dibadda ee ay falsayeen. Laakiin in ay ku jirnaa ugu hooseeya, at muhimka ah ee cidda ay yihiin, ayay habaabaan.
Waxaan dhici in ay aad u xun - gabi ahaanba daran waxaan ula jeedaa - tilmaamaha. Sidaas on malaha salaysan todobaadle xaaskeyga meel ii soo diri doonaa si aad u hesho wax ama iska wax off iyo mid aanan ka dhigi aan iyada waca ama waxa igu qaadataa shan jeer dheer. Oo ma ahan sababtoo ah tilmaamaha iyada ahaayeen xun, waa sababta oo ah waxaan ka dhigi markooda qaldan oo taga si qaldan oo aad ku soo jeestay.
Waa hagaag tani waa nooc ka mid ah sawir ah in halkaan rinji markii uu sheegay in Quluubtooda Dhuma. Quluubtooda safri hoos waddo khaldan oo waxaa iyaga hor kici meel qaldan. Waxay tahay badiyay. Oo isla kaas laga odhan karaa dembi oo dhan. dembi oo dhan waa in ka badan oo kaliya dibadda, waxa dhacaya, maxaa yeelay, isagoo qalbiyadiinna ka tago ka jiho qaldan. Iyo tallaabooyinka noo raaci.
Wuxuuna sidoo kale sheegay, "Waxay ma ay aqoon jidadkaygii." dabeecadda Ilaah ayaa soo bandhigay ka buuxsada iyaga ka hor - naxariistiisa iyo awooddiisa, iwm. Oo wuxuu iyaga ka siiyey ku amraa inuu ku jidadkiisa raacaan, in la raaco Jidkiisa. Laakiin halkii ay u doorteen in ay raacaan waddada kale. Waxa uu ka mid ahaa oo iyaga ka samatabbixiyey Fircoon iyo kala jabeen Badda Cas! Waa la aamini karin in aanay isaga ku aamini lahaa kadib markii uu arkay in. Waxay arkeen shuqulladiisii, laakiinse iyagu ma ay jidadkiisa ma ay yaqaaniin.
Christian, aad u ogaato in tani ay tahay waxa aad qabanayso marka aad dembaajiyey? In aad ma ahan oo keliya ka dhacin faraska ama soo socda gaaban oo aad si buuxda,? Waxaad doorashada Jid kale in mid ka mid ah in Ilaah ka soo baxay, waayo, aad. Waad leh, "Ilaah, Waxaan siyaabo aad aragteen oo waxaan iyaga ma jecli. Waxaan ahay ogyahay sida aad doonaysaan inaan ku noolaado, oo waxaan u malaynayaa in aan jidkiisu waa ka fiican. Anigu waxaan ahay xigmad aad iyo Rabbi a idinka khayr roon badan. Waxaan doonayaa inaan dooran aan waddada u gaar ah. "Tani waa kuwa sharka leh. Taasina waa waxa mar kasta oo aan samayn aan dembaabo,. Our dembigu waa ka wanaagsan dembiga inooga sheego this, shaki, Qarni sharka ah uga soo text this.
Waxaan u leeyihiin in ay si hagaagsan u malaynayaa of our dembi, ama ma aannu u nebcaan doonaa sida inaannu. Ma wax kasta oo ay qaadato si aad u aragto dembi unbaa. Waa fool xun. Ha isku dayin inaad ka samaysaa quruxsan. Waxaa laga yaabaa Waxaan rabnaa in aan xitaa la beddelo habka aanu la hadal waxa ku saabsan. Waa in aan ma aha oo kaliya ka fekero dembiga sida "Oh, Waxaan badiyay dagaalka ku. ama oh, Waxaan la dhibtoonayo this. "No waxaan doortay in ay Ilaah ku Cassiyaanna. Waxaan doortay in uu sameeyo wax kale oo aan ahayn waxa Ilaah nagu amray inaannu samayno, sababtoo ah ma jeceshahay waxa uu leeyahay in la yidhaahdo. Taasi waa mid dhab ah oo fool xun dembiga. Oo xataa sida Mu'miniinta kuwaas oo doonaya in ay sameeyaan doonista Ilaah, waxaan ku dagaalamaan si ay u sii aragti sax ah on our dembi.
Ralph Venning inaga caawinayaa in la fahmo waxa ay Dambi Siin marka uu leeyahay, "In gaaban, dembi ka dhicin ee caddaaladda Ilaah, kufsi ah inuu u naxariisto, oorin uu samir, ka yar xooggiisa, quudhsasho jacaylkiisa. Waxaa laga yaabaa inaan ku tag oo waxaad ku tidhaahdaa, waa canaantiinna uu siiya, jeesjeesa ee yabooha, cayda xigmaddii. "
Digniintan ayaa ugu sabuur halkan siinayaa bilaabmaa erayada, "Ha qalbigaaga ha adkaynina." Asal ahaan macnaha ma noqotay mid ku sii madax adag oo Beeniyey amarrada Ilaah. Iyo digniin in khuseysaa noo sidoo. Tani waa sababta qoraaga Cibraaniyada diiro qaybtan oo ka digtay in Cibraaniyadii waxay ka soo horjeeda iska soo dhacaya.
Marka aad madax ka gaaloobay amarrada Ilaah, aad qalbiga dhisku wuu sii adkaanayaa oo adag muddo. Quluubtooda runtii adag tahay sida caadiga ah dhacdaa in ka badan galaasyada dheer, ma habeen. Waxaan qabaa inaan marnaba noqon doonaa nooca qofka oo soo dhamaado dembi toobadla'aanta, laakiin waxaan kari waayeen. Runtii Quluubta adag dhici muddo marka aan doortaan in ay Ilaah ee wax yar Caasiya ka badan iyo in ka badan oo mar kale in ka badan. halkan eegno A deg deg ah, been yar waxaa, oo muddo waxaynu noqon biinta dembaajiyey oo uu bilaabo inuu qiil. Iyo ka hor inta aadan ogaan, waxaan uun iska, ilaa aan ka helno daalay iska joojin iyo Ciise socda wadajir. Kuwa dagaalo yar yar yihiin run ahaantii weyn.
Sidaas darteed haddii aad halkan u joognaa maanta iyo jidaynayey dembi qaar ka mid ah oo weli ku jira noloshaada, toobad! Hadda! Qirto oo aad dembi dadka kale. Hana bilaabina silsiladan qalbigaaga adkaansho. Halkii siyaabo aad isku halleeyaa, ogaan uu. jidadkiisa Raac. Aamini Ciise iyo rumaysan Kalimadiisii. Waxa uu aad u jecel yahay oo uu siiyey idin fari aad u wanaagsan. Raac Jidkiisa.
OK, sidaas darteed Ilaah cadhadiisiina waxaa ka xanaajiyey by dembigayga iyo dembigii uu doortay waddada kale. Sidaas waxa? Waa maxay dhibka ka dhashay doorashada jidkaa kale ah?
Dhegayso aayadda 11.
Sidaas daraaddeed waxaan ku dhaartay xanaaqayga, "Oo iyana weligood nasashadayda ma geli doonaan."
cawaaqib waa in Ilaah cadhadiisiina, Wuxuu iyaga ku ciqaabi doonaa. Dhacdo this gaar ah, Ilaah wuxuu u dambi dhaafi, laakiin ma uu oggolaan inay soo galaan Dhulka Ballanqaadka. Laakiin markii ugu sabuur qoray this, dadka Ilaah horay u soo galay. Sidaas daraaddeed ayuu u isticmaalaa qoraalkan in ay ka hadlaan nasasho Ilaah ee weligiis ah. Oo kanu waa sida qoraaga Cibraaniyada waxa aad u isticmaalaa. Ilaah wuxuu leeyahay nasasho weligeed ah in aan geli karaa, laakiin dembi naga haysan karto waxaa ka.
Waxaan halkan ka eeg in ma aha oo kaliya Ilaah isu cadhoonina, laakiin wuxuu go'aan isagoo cadhaysan. Dhab ahaantii, in tuducdan wuxuu ka dhigaa dhaar isagoo cadhaysan. Ayuu u sameeyey waxa ka mid ah xigasho oo hore ayaa sheegay in aan la qaban. Laakiin isagoo cadhaysan ma aha yeelsiiyeen sida kuweenna. Tani ma aha in la yidhaahdo in dhammaan, dad cadhadiisu waa dembi badan. Laakiin MARNA waa. Cadho ma isaga ma intoxicate iyo isaga guuraan si ay u sameeyaan go'aamada nacas ah. Halkii, Cadhadiisa heerka waxaa madax u, quduuska, wuxuuna weli ku jawaabtey wanaag iyo caddaalad.
nasasho Ilaah ee weligiis ah waa qurux badan u, nabad, non-walaaca, Ilaah ku ammaanaya oo meeshaas oo dhan oo dadka runta ah ku dhamaan doonaa in. cadhada Ilaah waa quduus ah, kaliya, wayn, argagax qaddar kuwa aad u hesho waxa ay u qalmaan [reword]. Ma jiro nasasho Jahannamo. Ma jiro gargaarka Jahannamo, Dhibaato iyo cadho kaliya. Oo waxaan aan la hadlayo ku saabsan cadhadii ciidan ama nin, laakiin cadhadii Ilaah Qaadirka madaxa kuu saaran yihiin, waayo, daa'in ah. cadhada Ilaah kajirin oo keliya ee Axdiga Hore. Waxa uu weli neceb yahay dembiga maanta. Waa in aan ka cabsataan Ilaahiinna ah la yaab leh. Dembigooda iyaga ku hayay inta kale Ilaah ka, oo kuweenna oo aad u awoodid.
Waxaa loogu talagalay qof walba oo halkaan caawa. Ka dib marka aad ku dhiman, sidoo kale waxaad geli doontaa nasasho Ilaah ama adkaysan cadhada Ilaah. Kuwaasna waa laba doorasho oo keliya. All oo naga mid ah waxay mudan yihiin doorasho labaad. Maxaa yeelay, dhammaan oo naga mid ah waa sida jiilka dembi leh ayuu ka hadlayaa. Waxaan jidka noo gaar ah. Waxaan ku ambiyaa qalbiyadeenna iyo mayno jidadkiisa raacin. Waxaan sameeyey wax aad in Ilaah, neceenna raalli ka badan iyo in ka badan oo mar kale in ka badan.
Darteed ee ma jirtaa rajo kasta oo naga mid ah? Waxaa jira.
In 1 Tesaloniika 1:10, Paul nin qeexayaa oo ka yimid Galili erayadaas, "Wiilkiisa ka yimid xagga jannada, kii Ciise kuwa dhintay ka soo sara kiciyey, Ciise inaga samatabbixinaya cadhada in ay yimaadaan. "
Oo mar dambe 5:9-10 ayuu ku yidhi Mu'miniinta, "Waayo, Ilaah inama uu ku Qaddarray waayo, cadhada, laakiin si aad u hesho inaynu ku badbaadno Rabbigeenna Ciise Masiix, kan inoo dhintay si haddii aynu soo jeedo ama hurdo aynu isaga la noolaado. "
Our rajada kaliya waa Ciise. Oo isna wuxuu ina jecel yahay si ka badan.
"In Waa kan jacaylka, mana aha inaynu Ilaah jeclaaday laakiinse isagaa ina jeclaaday, oo wuxuu Wiilkiisa u soo diray in ay kafaaraggudka dembiyadeenna. " 1 John 4:10
Waxaa jiray koob, cadho miidhan caraysan iyo xanaaq in Ilaah diyaar u daadinno, noo. Laakiin kuwa naga mid ah ee Masiixa, Ma aha in aynu si cadho adkaysta. Halkii, Ilaah koob ayaa soo qaatay madaxa naga saartay oo uu u soo guurtay. Waayo, kuwa naga mid ah ee Masiixa, Markaasuu wuxuu soo kaxaystay cadhada in aan kor u kaydiyaa, waxa oo dhan ku shubtay in hal koob, ku rid ka badan madaxa Wiilkiisa wuxuuna oo dhan ku soo shubtay isaga on. Waa maxay jacayl weyn! Ciise adkaystay cadhada argagax Ilaah dembilayaasha iskutallaabta. Waxa uu iskutallaabta ku dhintay, laakiin wuxuu ka qabriga kacay intii saddex maalmood ka dib sida King guul. Markaasaa Ciise ayaa sheegay in, "Ii kaalaya, kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow oo dhan, oo anna waan idin nasin doonaa. " (Matthew 11:28)
News Good waa in kuwa ay Iimaan ugu riday Ciise this- Ilaah ma laha cadho noo. In Masiix, Ilaah ma aha noo cadhoon. Waxa uu ka calool naga at marka aan dembaabo,, laakiin nalamana cadaabayo doonaa iyaga. Waxaa barakaysan ninkii dembiyadooda la ma tirin isaga ka gees ah.
Oo haddii aan sii wadaan in ay ku kalsoon tahay in Masiix, Markuu soo laabtay waxaan isaga ka heli kartaa farxad halkii argagixiso. Oo waxaan ku gabyi karaa, "Sidaas oo kale, sidoo kale waa la naftayda."
Mahadsanid, Trip. Waxaan doonayay inaan si aad u hesho qaadataan wax maxaa yeelay, waxaad noo ahayd qof ayaa door weyn ee aan Masiixa la socdaan. Tani waxay noqon doontaa dheer, sidaas haddii aadan hareer in ay, waxaan fahamsanahay.
Markii aan noqday Christian ah dhawr sano ka dib, wax way fudud yihiin- ku kalsoon tahay Ciise si buuxda u, Ilaah waa idin soo forives wax walba (ee la soo dhaafay, jooga, mustaqbalka), kaliya isaga isku halleeya oo oo wuxuu idinka qaadan doonaa daryeelka of inteeda kale. Ma aha in la sameeyo dareenkooda ku saleysan iimaanka, laakiin dib wakhtigaas waxaa jirtay farxad joogto ah iyo addeecidda si dabiici ah u yimid ka fikirka la ii shuruud la'aan waa cafiyan. Just kid ah oo ku kalsoon in uu aabihiis oo ka welwelina u baahan inaad samaatid. Ahmiyada ahaa oo dhan ku mahad naqaynaa, Masiixu wuxuu u. Ma aanan u baahan tahay in ay ka wel ku saabsan daraaddiis dembi sida aan u viewed- aan shaqo ay ahayd in ay ku kalsoon tahay Ciise, Ruuxa Quduuska ah ka qaaday daryeelka ee intiisa kale.
Sida aan waqti dheeraad ah oo dheeraad ah ku bixisay in erayga, waxaa jiray Qorniinka iman lahaa in ruxmay in Foundation Trust / nimcada aan hore ku tilmaamay iyo dib igu qaadatay in aan carruurnimada. Aabbahay gaar ahaan (kuwaas oo ahaa dhallinyaro ah oo ay iimaanka waqtiga, sidaas darteed anigu ma aan qaban ha isaga ka gees ah) ahaa mid aad u deg deg ah in ay ku adkaysato caddaaladda Ilaah iyada oo aan wax lagu miisaamo la barayay ku saabsan inuu u naxariisto. Tusaale ahaan, wax buu i baray da 'aad u yar oo ay tahay in aan ka toobad keenin, dembiyadaydii oo dhan si ay u badbaadaan, in badan oo masiixiyiin ah in uu noqon doono baraaruga edeb darran on Maalinta Qiyaame, waayo, waxay u malaynayaan in Ciise ayaa u soo dhaweyn doonaa marka ay weli jebin sharciga Ilaah, iwm. Wuxuu ahaa weyn ku hadlaya tounges, wax kale oo badan, laakiin ma uusan ku dhuftay inta badan ku hallayn Ilaah qayb.
Sida shaki iyo aad u badan cuduradaas iyo waxaan u noqday mid si qoto dheer xiiso u fiqiga, meel ay weheliyaan line aan hab xariir ah isku dayaya in ay ka soo qaato waxyaabaha geli awood u gaar ah oo fahmi walba garaadkiisa halkii ay barbaro ku dhow oo sugaya on Ilaah dhigay. Waxaan kuuma sheegi karo inta saacadood ee aan soo qaatay cilmi baarista alaabtii fiqi ahaaneed, su'aalo laga jawaabin, kor u eegay Qorniinka in Greek, iwm. internetka ee sannadkan la soo dhaafay. habka fikirkaygana ayaa “Waa hagaag, haddii Ciise ayaa dhamaan xaaladahaan oo dhan, ka dibna waxaan u baahan tahay si loo hubiyo in aan la kulmo shuruudaha.” Sayidka, aan socod noqday caqliga iyo perfectionistic. Waa maxay mar si fudud u noqday wada adag, kii aan isku hallaynayay curyaan ahaa,, oo sidaas ayaan weli hadda ahay in waqti quruxsan cuslaatay ee aan Masiixa la socdaan.
Waxaan aragto laba xero qaloocan horjeeda kiristaanka iyo hubi in aad ogolaato waxaa laga yaabaa in aan ahay- 1) ah “addeecid” xerada iyo 2) Ciise waa dhan bixisay” xerada. xerada addeecidda waa degdeg in ay ku adkaysato masuuliyadayada oo inta badan la tixraaci karo Injiillada kale, Soo dajinta, Axdigii Hore, iwm. Ciise ayaa u bixisay oo dhan walaacyada xerada isaga oo keliya isku halleeya oo u muuqataa in ay ku tiirsan yihiin aad ah loola on Paul. Marka aan bilaabay Masiixa la socda, Waxaan hubaal lahaa arinkii ee Camp 2, laakiin in aan bartay Qorniinka iyo (nasiib, ra'yiga dadka oo internetka) Waxaan u noqday mid aad u naxaysaan oo ku saabsan eegeegeen iyagoo aan waxgarashada nimcada in noloshaydu bedelay. Camp 1 waa weyn oo ku saabsan adkaynaya xaqnimo iyo is beddelin dabiicadda Ilaah, laakiin waxay u muuqataa in ay isku dayaan in ay soosaarka addeecid ku geyaan jidhka. Waxay tixraaca doonaa waxyaabo la mid ah “Sayidow, Sayidow… Weligay idinma aqoon” Qorniinku. Camp 2 waa weyn oo ku saabsan adkaynaya dambi dhaaf Ilaah iyo alaabtayda oo qorax iyo rainbows ah, laakiin cadaynaysaa Ilaah u aqbalin sida haddii uu yahay laba qof oo gebi ahaanba ka duwan Axdiga Hore si NT. Waxay tixraaca doonaa in aan waxba inaga sooci karin jacaylka Ilaah oo nooca in oo ah alaabtii. runta Ilaah ay tahay in la meel dhexe isku dheeli tiran, xaq u? My goolka waxaa kaliya in Ilaah wuxuu og yahay, waayo, kuwaas oo uu sheegay in isagu waa iyo waxay leeyihiin waxgarasho kitaabiga ah isu dheelitiran oo ka mid ah sifooyinka uu. Waxaan isagoo markii ugu adkaa ee soo laabanayo kaliya isaga isku halleeya oo intuu xiriirka isaga oo leh, maxaa yeelay si joogto ah ka walwalsan Waxaan ahay “aan awoodin in ogaado wax walba oo” (Waxaan ku tiirsan garashadaydu gaar xun). Waxa kaliya ee aan qaadan raaxada ee hadda waa this- Helitaanka dib u socodka iyo xagga Ilaah ka hadalka iyo kalsooni ku qabka in wax this qaadan doonaan meel kasta oo uu u baahan yahay inuu ku qaadan haddii aan kaliya isaga ku aamini lahaa loo sameeyo. Haddii uu leeyahay oo dhan xaaladahan, ka dibna aan Shaqadoodu waa inay ku kalsoon tahay in nimcadiisa caawin doona ila kulmo iyaga.
Jacayl badan, Trip.
Liz • August 10, 2016 at 8:52 waxaan ahay • Reply
Waxaan arkay adiga oo ka caroodaan, iyo waxa aad xaq u tahay. asal ahaan Waxaa jira laba xeryaha marka aad eegto sawirka weyn. Waxaa jira dheelitirka in kastoo, iyo inaan ogahay waxaad ku heli kartaa. Waxaan idinku leeyahay hesho halkii ay ka heli maxaa yeelay, Rabbigu wuxuu inoo sheegayaa, “garaaca oo waa laydinka furi doonaa”. Waxbarashada Word waa wanaagsan yahay, ha joojin. Laakiin, Waxa kale oo aad ku sugan tahay Salaadda? Waxaan ma ka hadlayaan tukanayay la dareen ah waajib ama liiska lagu dhaqdo ee codsiyada a. Laakiin, tukanayay run ahaantii aad qalbiga ka. Waa wax ay ku dhaqmaan, Waxaan barashada sida loo waayadan dambe si fiican u sameyn qudhaydu. First, Ilaah ku ammaanaan waxa loogu talagalay qofka uu yahay. Markaasuu u dambidhaaf warsan, dhaaf gaar ah. Ka dib markii in u dhowaan carshiga la walaacaaga, walwal iyo culaabta. Ku duub ilaa ammaan oo dheeraad ah. Waxaa jira qaar ka mid ah Chine weyn waxaa kaa caawin kara in la this (Examen oo imtixaan). Labaduba waa apps salaadda in saaxiib anigaa of heer sare ah soo jeedisay. Anigu ma aan go'aansaday kuwaas oo mid ka mid ah in ay weli ku samayn. Sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa buugga reading, gubanaya, by Priscilla Shirer. Waxaan ku reading hadda. Waxay ku saabsan salaadda iyo dagaalka ruuxiga ah iyo waxa uu si weyn! Runtii furitaanka indhaha. Waxaan ka fakarayaa iyo aad u badan in bulshada Western aynu nahay ruuxa hurda. Waxaan leenahay hab caadi ah in Salaadda oo dagaal ruuxi ah waa sheeko cirfiid a – laakiin waa dhan aad dhab ah. Waxaad ka heli doontaa nabad Salaadda – la hadal Ilaah ku saabsan su'aalahaaga. Waa caadi in aan su'aalo waydiiyo. Waxaan rajaynayaa in aad awoodid in this arki tahay iyo waxaan rajeynayaa in aad ka caawisaa Evan!
Your Sister in Masiix,
Jimmy Hayes maaliyada • November 24, 2015 at 12:42 pm • Reply
Waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwanyahay, ka volleyball indoor wada jir ah ula kubada xeebta dibadda. Waxa ugu adag si aad u hesho waxtar leh si ay dhab ahaantii waa aad u guurto foward jajabiyey dhagax la shiday dhabta ah. xeelad Backyard A guud ahaan waa loo idmo 3 farsamada tallaabo meesha aad bilowdo si toos ah ilaa halkii ay hore u socdaan sidii aad xumaada.